Dhamsaa baqattoota Oromoo kan yeroo ammaa gara Jimmaatti baqatanirraa ergamee. - Oromia Shall be Free
Dhamsaa baqattoota Oromoo kan yeroo ammaa gara Jimmaatti baqatanirraa ergamee.
Ganama kana ummata keenyaa kan Harargee san koreen Oromiyaarra dhuftee sun filannoo sadii dhiyeesaniif iniis
1.Bakka irraa dhuftanii debitanii rakkoo jiruu maridhaan bulchinsaa Aradda kessannii fanaa furuu
2.Godinaa kessaanitti hadaraa isiin keninee hangaa motumman Nannoo falaa isinii barbaduu isaan iddoo kessanitti isiin gargaruufi tiksuu
3.Nutti hasoofnee iddoo biraa kan furmataa ni tahaa jennuu isiin geysinaa jedhaniin. Ummannis filannoo 1ffa fi 2ffas akkan fudhaneefi iddoo irraa dhufnee hin tahiin malee bakka biraa nuu geysaa ergaa jedhaniini bodaa koreen mariachuun Godinummaa Sanaa KAMPII YANBAROO jedhamtuu kan Sheek Alahamudiin tahee himamuu isiin geysinaa qophawaa jedhaniin amma ummanni kampii maal gonaa? Nutti hin demnuu jechuun achii keysatti rakkinni umamaa jiraa.
Obboo Musxafan Gaffiin keysaan murtee kanan fudhataan tanan wan biratti sanifuu fudhadhaa ykn isiin dhisnee demnaa jedhanii ummataa dorsisaa jiraan.
Lammii tenyaa hundinuu nu gargaraa……
Dhamsaa baqattoota irraa ergamee.!!!”
Previous Lafti Kan Ummataati Moo? Kan Mootummaati?
Next SHIRRI QABSOO OROMOO GALMA GAHUU HANQISE DHALOOTA QUBEETIIN GOOLABAMUU QABA!